Lixabiso CNC yokugaya Stainless iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo CNC wokugaya-ngqo steel yokugaya iinxalenye
Insimbi engenasici inezinto ezinje ngo-Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, no Cu. Insimbi engenasici inempawu ezibalaseleyo njengamandla awodwa, ukumelana nokunxiba okuphezulu, ukumelana nokubola kunye nokumelana nerusi Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso, oomatshini bokutya, ishishini le-elektroniki, ishishini lezixhobo zasekhaya kunye nokuhombisa ekhaya, ukugqiba ishishini. Ukusetyenziswa kunye nethemba lophuhliso lwentsimbi engenasici iya kubanzi ibe banzi, kodwa isicelo kunye nophuhliso lwentsimbi engenasici ixhomekeke ikakhulu kwinqanaba lokuphuhliswa kwetekhnoloji yonyango yomphezulu.
Izinto eziluncedo ze Ouzhan steel stainless iindawo milled
Inkonzo yokugaya i-stainless steel-china eyenziwe ngomatshini we-china CNC CNC
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekisa ngentsimbi engenasici ngezinto ezizinzileyo nezithembekileyo ze-CNC. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza kunokuqinisekisa ukuveliswa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zomatshini wesinyithi. Ukongeza, iimveliso ze-CNC ezingenazintsimbi zinikezelwe ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngexabiso lezinto ezingenasici ze-CNC iimveliso zokugaya abathengi bethu abaxabisekileyo.
Zeziphi izinto ezisetyenziselwa izinto zentsimbi ezingenasici
1. I-Austenitic insimbi engenasici engena-milled ine-intsebenzo ebanzi nefanelekileyo, kwaye isetyenziswa ngokubanzi ekutyeni, kwizixhobo zeekhemikhali ngokubanzi, nakumandla e-athomu;
2.Iintsimbi zeFerritic ezingenasici ezingenasici, ezisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezinqabileyo;
3. Iintsimbi ezisulungekileyo zentsimbi iMartensitic, esetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezinganyangekiyo kwi-asidi ye-sulfuric, i-phosphoric acid, i-formic acid kunye ne-acetic acid;
4.Chromium-nickel-molybdenum iindawo zokugaya zensimbi ezingenasici, ezisetyenziswa ngokubanzi ekucoceni ioyile, isichumiso, iphepha, ipetroleum, imichiza kunye namanye amashishini ukwenza ubushushu kunye nezihlanganisi.
Izinto eziluncedo Ouzhan inkonzo yokugaya steel stainless
-Zonke izinto ezichanekileyo ze-CNC zentsimbi ezingenasici ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
- Ngokutsho imizobo okanye iisampulu ukwenza ngqo iindawo yokugaya steel stainless.
-I-Ouzhan ingaphezulu koomatshini bokuqhubekeka, iinkonzo ezihlanganisiweyo, imigca yemigangatho yemveliso, kwaye iza neziqinisekiso zemathiriyeli kunye neengxelo zovavanyo lwemveliso.
Egqithileyo Ingcango yealuminiyam ecoliweyo kunye neefestile zokwenza iifestile
Okulandelayo: Elungiselelweyo steel yokugaya izahlulo processing ngomatshini iindawo
Elungiselelweyo ubhedu electroplated iindawo yokugaya pr ...